About BarCamp Yangon 2017
IT ALL STARTED WHEN /
The first BarCamp Yangon became the biggest BarCamp in the world with worldwide record attendance with 3,000 happy barcampers!
V.V.VIP ATTENDEES /
We think our regular BarCamp speakers are pretty VIP-ish and super-geeky! But the honor of the most famous barcamper award goes to the world's most influential leader of our time, Daw Aung San Suu Kyi.
She opened BarCamp Yangon 2012.
She came. She spoke at BarCamp.
BARCAMP IS... /
WHAT THE HECK IS A BARCAMP?
BarCamp ဆိုတာ သတငျးအခကျြအလကျနှငျ့ဆကျသှယျရေးနညျးပညာနယျပငျအတှငျးရှိ ပညာရှငျမြား၊ ဝါသနာရှငျမြား နှငျ့ စိတျဝငျစားသူမြားက စုပေါငျးပွီးအသိပညာ အတတျပညာမြားဖလှယျနိုငျဖို့အတှကျ နရောတဈခုမှာ စစညျး စကားဝိုငျးဖှဲ့တဲ့ပှဲဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ ထူးခွားခကျြကတော့ ကိုယျပွောဆိုဆှေးနှေး ခငျြတာတှကေို ခေါငျးစဉျတှပေေးပွီးဆှေးနှေးခငျြသူတှေ၊ နားထောငျခငျြသူတှကေ သကျဆိုငျရာအုပျစုကလေး တှဖှေဲ့ပွီး လှတျလပျပေါ့ပါးစှာ ဆှေးနှေးသညျ့ပုံစံဖွဈပါတယျ။ သမားရိုးကြ ဟောပွောပှဲတှေ လိုတဈဦးက ပွောပွီး ကနျြသူတှကေ နားထောငျမေးခှနျးတှေ ပွနျထုတျတဲ့ပှဲမြားနဲ့ကှဲပွားပါတယျ။ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျမှုနှငျ့ အသိပညာဗဟုသုတမြှဝမှေုစသညျ့သဘောတရားက အခွခေံပွီး လူတဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျကွား ပညာရှငျနှငျ့ ပညာရှငျမဟုတျသူတှကွေား အသိပညာကှာခွားခကျြ ကဉျြးမွောငျးလာအောငျ၊ သိခငျြတာ ပိုသိလို့ရအောငျ လုပျဆောငျကွတဲ့ လူမှုလှုပျရှားမှု ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ဘားကမျ့ကို မွို့နယျမြားစှာမှာ အကွိမျပေါငျးမြားစှာ ကငျြးပခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ BarCamp ကို ၂၀၁၀ မှစတငျကငျြးပခဲ့ပွီး ယခု (၉) ကွိမျမွောကျ ဘားကမျ့ရနျကုနျကို ဇနျနဝါရီလ ၂၇ နှငျ့ ၂၈ ရကျမြားတှငျ မနကျ ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ စညျကားသိုကျမွိုကျစှာကငျြးပတော့မညျဖွဈပါတယျ။ မညျသူမဆို လာရောကျ လလေ့ာ၊ ဆှေးနှေးဖို့ ဖိတျကွားအပျပါတယျ။
BarCamp ဆိုတာ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနယ်ပင်အတွင်းရှိ ပညာရှင်များ၊ ဝါသနာရှင်များ နှင့် စိတ်ဝင်စားသူများက စုပေါင်းပြီးအသိပညာ အတတ်ပညာများဖလှယ်နိုင်ဖို့အတွက် နေရာတစ်ခုမှာ စစည်း စကားဝိုင်းဖွဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ထူးခြားချက်ကတော့ ကိုယ်ပြောဆိုဆွေးနွေး ချင်တာတွေကို ခေါင်းစဉ်တွေပေးပြီးဆွေးနွေးချင်သူတွေ၊ နားထောင်ချင်သူတွေက သက်ဆိုင်ရာအုပ်စုကလေး တွေဖွဲ့ပြီး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ဆွေးနွေးသည့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျ ဟောပြောပွဲတွေ လိုတစ်ဦးက ပြောပြီး ကျန်သူတွေက နားထောင်မေးခွန်းတွေ ပြန်ထုတ်တဲ့ပွဲများနဲ့ကွဲပြားပါတယ်။ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် အသိပညာဗဟုသုတမျှဝေမှုစသည့်သဘောတရားက အခြေခံပြီး လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ကြား ပညာရှင်နှင့် ပညာရှင်မဟုတ်သူတွေကြား အသိပညာကွာခြားချက် ကျဉ်းမြောင်းလာအောင်၊ သိချင်တာ ပိုသိလို့ရအောင် လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ လူမှုလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဘားကမ့်ကို မြို့နယ်များစွာမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ BarCamp ကို ၂၀၁၀ မှစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ယခု (၉) ကြိမ်မြောက် ဘားကမ့်ရန်ကုန်ကို ဇန်နဝါရီလ ၂၇ နှင့် ၂၈ ရက်များတွင် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆို လာရောက် လေ့လာ၊ ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
© 2017-2019 by BARCAMP YANGON ORGANIZER TEAM. For Questions / Facebook us at Facebook/BarCampYangon